ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ | Page6| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေပါက သစ်သီးတွေ စားလို့ရသလား
8.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မိုးတွင်းမှာ လှိုင်လှိုင်ပေါလှသော သရက်သီး၊ နာနတ်သီးများက လူတိုင်းကို ဆွဲဆောင်လျက် ရှိပါတယ်။ သို့သော် အချိုများသော အသီးများကို စားခြင်းကြောင...
သွေးလွန်တုပ်ကွေးအန္တရာယ် သတိပြု ကာကွယ်ပါ
7.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မိုးလေး တဖွဲဖွဲ ရွာလာတာနဲ့ ခြင်တွေကလည်း တစီစီ ဖြစ်လာတာပါပဲ။ ခြင်တွေနဲ့အတူ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကလည်း လိုက်လာတော့တာပေါ့။ ဘယ်သူဘယ်ဝါ့ကလေးတော့ဖြင...
အရိုးကျီးပေါင်းနဲ့ သွေးလေးဖက်နာ ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ
6.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
တစ်နေ့တစ်နေ့ ဆေးခန်းလာပြီဆိုရင် ဒူးနာလို့၊ ခါးနာလို့ဆိုတဲ့ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ် ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတွေက မနည်းလှပါဘူး။ ဘာကြောင့် အဆစ်အမြစ်တွေ ကိုက်ခဲ...
ပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ နည်းလမ်း (၈) သွယ်
သေချာ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုးမွှားကူးစက်နိုင်ခြေဟာ နည်းတာ မဟုတ်ဘူးနော်။
5.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အခု ပြုံးလိုက်၊ ခဏနေ မဲ့လိုက်၊ ပျော်လိုက်၊ ခုန်လိုက်၊ ဝမ်းနည်းလိုက်နဲ့ စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်သူဆိုရင် ဒါလေးဖတ်ထားလို့ အကျိုးမယုတ်ဘူးနော်...
လိပ်ခေါင်းရောဂါ ကာကွယ်ကုသဖို့ ...
ထိုင်မရ၊ ထမရ ဒုက္ခရောက်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ လိပ်ခေါင်းပါပဲ။ ဒီလို စိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့ လိပ်ခေါင်းကို ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ? ဘယ်လိုကုသနိုင်မလဲ?...
ကြက်ဥများနဲ့ မနက်စာဟာ ခွဲခြားမရပါဘူး။ မနက်စာစားရာတွင် ကြက်ဥ ထည့်စားခြင်းဖြင့် တစ်နေ့တာလုံး လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကို ရရှိစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှလ...
ဖုန်း အသုံးလွန်သွားလို့ လည်ပင်းနာခြင်း
4.8.2019 | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
အခုခေတ်မှာ လူအတော်များများက ဖုန်းအသုံးများ၊ အကြည့်များလာတဲ့အတွက် လည်ပင်းမှာ ထပ်ခါထပ်ခါ ဒဏ်ဖြစ်စေပါတယ်။ လည်ပင်း၊ ပခုံးနဲ့ တစ်ခါတလေ ခါးကြွက...